Kugadzira Imbwa Mapendi Kuti Uve Akatendeka Kune Chaicho Bowser
4 Anopenga Imbwa Kupenda? Kwete, Fido Pamasikati Tinoda Nhasi
Sei tichivhenganiswa pakushandisa matsva matsva? Zvakanaka izvo hazvisi izvo zvakajeka. Iwe ungazoda kutibvunza isu pachedu. Pano ndine mashoma mashandiro semufananidzo wedhijitari, chivezwa, uye zvidimbu zviviri zvemadhijitari zveangu basa.
Iyi inofara kwazvo imbwa mifananidzo. Ruzivo rwehunyanzvi kubva kune yedu Covid 19 nyika.
Ini ndinongotengesa hunyanzvi hwangu pazasi semaposita uye mapurani eCanvas.
Instagram ndeye chero vedu vateki. Iyo mharidzo inoratidzika chaizvo inotaridzika nyanzvi. Wese munhu anoda yako pet mifananidzo. Kutanga kana nyanzvi imbwa yako mifananidzo inotonga.
Takashi Murakami anoshandisa ekutanga ma1970 maruva ane kumeso kumeso sechinangwa chake. Taura nezve kukwidziridzwa. Iwe haugone kucherechedza basa remuartist kubva kumifananidzo yake yemumigwagwa yaPom mbwanana yake. Takashi's Instagram feed ine yakawanda yeiyi bowzer (kwete chaizvo iyo muchinjikwa mhando).
Takashi Murakami ine nzira inonakidza yekuona mufaro. Chido chako pachedu kana kuda kupenda nyika iyo vamwe vanogona kuenderana nekunakidzwa.
Chikuru Kupfuura Hupenyu
Jeff Koons anogona kuve anonyanya kuzivikanwa anorarama muenzi. Kana usati wanzwa nezvake, rega ndikuzivise. Balloon Imbwa (Tsvuku) chi 20 tsoka chitsiko. MaKoons anokomborera ako ezvekutengesa zvisikwa. Zvino vamwe vanoseka basa rake nekuda kweizvozvo. Jeff inzvimbo yemahara inogara ichingowanza pamadingindira ake. Inotarisirwa seinonyanya kutorwa nevanyori (zvinoenderana nechikwama chako), basa rake riri paruzhinji kuratidza mukati mehunyanzvi hwenyika hwese.
Balloon Imbwa Tsvuku naJeff Koons
Jeff's Balloon Imbwa (Orange) yakatengeswa mukudonha kwegore ra2013 pamadhora 58.4 mamirioni. Kuisa zvinyorwa panguva iyoyo yemunyori mupenyu. Nyaya dzefekitori yaKoons, iye muimbi iye, nebasa rake, zvine mukurumbira.
Mifananidzo yaTakashi Murakami naJeff Koons haisi kutengeswa neni. Iko kushomeka kwekushandisa kwemazita avo uye iwo maviri mifananidzo anowira pasi pekushandiswa kwakanaka.
Imbwa Paintings Dhijitari
Iwe unofunga nezvekushandisa kwangu kwemadhijitari maturu ekupenda? Ini handisi purist. Ehezve izvo hazvisi mune zvakadaro zvinofanirwa kuzunza chikepe. Chokwadi. Ura hwangu hunondiudza kuve kumberi newe. Ini ndinoda imbwa, uye ini ndaifanira kuisa maturusi angu kune fido.
Fido inouya kubva kuLatin "kuvimba kana kuvimba". Zvirokwazvo kana iwe usingakwanise kuvimba nemwana wako, ndiani waunogona kuvimba naye?
Music Notes 6 naDavid Bridburg
Kana iwe uchida imbwa, chikonzero iwe chawakaisa mukati kune ino blog positi, iwe unofanirwa kuda iyo labhu. Ini ndakapa kutarisisa kukuru kuziso rake. Unogona kudzvanya pamufananidzo kuti uone zviri nani.
Music Notes 34 naDavid Bridburg
Iwe unogona kunge uri munhu weRottweiler kana iwe usiri. Iko hakuna kudikanwa kwekukugonesa iwe, kana hapana nzira yekukugombedzera. Ndine nzvimbo yakapfava mumoyo mangu yeaya maora. Zvekare ziso mune izvi rakanyatsoitwa. Mhuka iyi yakapinza uye yakajeka, ine chivimbo kwazvo, mutambi.
Zvino izvi zvinogona kukurova semusiyano, ndinochengeta mifananidzo yangu yemhuka mune yangu Tumira Yazvino Unganidzo. Iko kuunganidzwa kwakagadzirwa mushure meKuunganidzwa Kwangu Kwazvino, kunotsanangurwa senge chidzidzo chinova chinhu. Funga nezve Jeff Koons 'Balloon Imbwa.
Aya ndiwo maratidziro andinoita kuunganidza:
“Nziyo dzemumhanzi dzakaita seupenyu dzinokurumidza. Unogona kuona mune yangu yekutanga Contemporary Unganidzo, ndinodzokorora zvidzidzo sezvinhu. Mune ino muunganidzwa, iyo Post Contemporary Unganidzo, ini ndinosanganisa hupenyu kudzokera kuzvinhu. Mhuka dzinowanzoshorwa uye kuita sevanhu zvichivaita musoro wakakodzera. "
David Bridburg, munyori weblog
Hukama hwemazuva ano kune fido huri kumwe mukati imomo. Iyo canine inogona kurarama yakareba kwazvo mumba mako kupfuura musango. Tinoda vana vacho.
Wedzerai: Canine, Wolf, Fox, uye Rottweiler
Ndatenda kune vanhu vaviri vanoziva hunyanzvi hwangu. Ivo vaviri vari kuverenga ichi chinyorwa vataura, wedzera rumwe ruzivo kuti uverenge uye wedzera yako mamwe canine mifananidzo. Amai vachisimbirira kuti ndine zvakawanda zvekupa vaverengi vangu. Mumwe muteresi akandinyorera achiti haana kuona iro mhumhi kudhinda raainaro richikurukurwa.
Kunzwa ndakakurudzirwa, ndadzoka kuzovandudza iyi posvo. Ini ndinosiya yangu yakapusa mhedziso pakupedzisira isina kuchinja.
Mhumhi ndiyo yedu yekutanga canine
Iwe pamwe unofarira idzi mbiri shanduro dzemufananidzo wemhumhi. Maitiro inzira yakasarudzika. Ini handisi kuzopa yangu diki yekutengesa chakavanzika.
Mamiriro ekutanga emufananidzo uyu akajeka uye akareruka.
Music Notes 21 naDavid Bridburg
Iye akanaka anotarisika mhumhi. Iwe unogona kuona hunhu hwake, achifara aine chinangwa pane chimwe chinhu munharaunda yake. Imbwa iri mukati iripo. Kungofanana nemhino nenzeve.
Mhinduro dzako dzakakamurwa pakati pemifananidzo miviri iyi. Kusiya munzvimbo chena zvehunyanzvi kunonakidza. Chimiro chemufananidzo chakasimba.
Yechipiri vhezheni yaive yakafanirwa nekuti huswa hwakasvibirira hunhu hwehumhi.
Music Notes 36 naDavid Bridburg
Shanduko imwechete muvara wakawedzerwa inogadzira mhumhi pakuvhima. Ari kuda chinhu chakanaka. Sembwa iri kutevera tsindi.
Kutora rusununguko, ini ndawedzera kuwanda kwemavara kune gava rangu. Unogona kuda izvi. Gava rinomhanya neruzhowa kuona isu vanhu tinonyatsonakidzwa. Kupenya kwerusununguko rwechisikigo.
Music Notes 37 naDavid Bridburg
Chii chinokwezva nezve uyu mufananidzo wegava? Uchazviona, kana ndikazvitaura.
Gava munharaunda yako harimbokutenderi kuti uswedere pedyo. Kana iwe wakaita sevakawanda vedu. Izvi zvepedyo zvine simba nekuda kweizvozvo. Unova chikamu chezvisikwa.
Gax rangu rakagamuchira mhinduro inodziya kubva kuvanhu vazhinji. Seye muimbi, ini ndinotenda icho chikuru. Isu maartist tinoiswa pachena dzimwe nguva.
Rottweiler rudzi rwakakosha kwazvo
Makumi makumi maviri apfuura, shamwari inodiwa yekare yakandizivisa kwaari Rottweiler. Ainzi Porkie. Hume hombe rottie, Porkie aive imbwa yekununura. Shamwari yangu yaive imbwa yekuzevezera. Nyika yeConnecticut yakanga yamuisa naye, achiponesa hupenyu hwake.
Porkie akatsamwa paakamuwana. Akanga ashungurudzwa zvakanyanya. Vhiki rekutanga ari mumba make, akati kune shamwari yake, "Handikwanise". Vhiki rechipiri, anga asati ambove nembwa yakatendeka.
Iye angati, hakuna imbwa yakafanana neiyo Rottweiler. Rudzi rwake rune mabasa ese. Ndiye imbwa inonyanya kushanduka.
Iyi ndiyo yechipiri vhezheni yemufananidzo weRottweiler.
Music Notes 33 naDavid Bridburg
Hupenyu hune nguva dzahwo dzakanaka uye dzakaipa. Ndiri ani kuti ndikuudze izvozvo? Iwe unonyatsoziva. Porkie akapfuura, uye shamwari yangu yepedyo yakapfuura yakaputsika moyo makore maviri gare gare. Ndichiri kuchema panguva iyoyo, ndinotarisa kumashure nendangariro dzinofadza.
Mukutanga kwake, Porkie aive mumwe wevatambi vakurusa vandati ndamboziva. Vaviri ava vaive nemoyo mikuru kwazvo.
Kokupedzisira kutaura ndiko mhedzisiro chaiyo kwandiri pachangu. Sezvo ini ndakati kwira kumusoro neichi chigadziriso ini handichinje iyo yekutanga mhedzisiro. Kunze kwekushandura izwi rinotungamira kubva ku "imbwa" kuenda ku "canines".
Canines senge inyaya yemusoro wenyanzvi wakanaka anga aripo nekusingaperi. Chero bedzi isu tanga tiripo. Maitiro matsva anomutsidzira.
Dzvanya pane chero chifananidzo chako chinoshamisira kuti uone peji rekutengesa peji pawebhusaiti yangu (hunyanzvi hwangu chete, haubatsiri kuvhara chifananidzo kumusoro).
Mubvunzo: Vanyori vemazuva ano vanoda imbwa sei? Rega ndiverenge nzira. Kunyanya, iyo nyowani nyowani inonakidza.
Kwakajeka Art yeAmerica Kuda: Matatu Kusimudzira Mazano